विकाश पराजुली काठमाडाैं, २७ कात्तिक
बुटवलको धागो कारखाना नजिकै रहेको पशु वधशाला सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ । सिसा फुटेका छन् । भवन निर्माण भएको स्थान झाडीले छोपेको छ । वधशाला नजिकै राँगा, भैंसी, पाडाका हाडखोर मात्र छन् ।
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र बुटवल उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा ४ वर्षअघि यो वधशाला निर्माण भएको थियो । तर, प्राविधिक त्रुटी भएको भन्दै वधशाला सञ्चालनमा आउन सकेन । कर्मचारी संयन्त्रले पनि वधशाला चलाउन चासो दिएनन् । जनप्रतिनिधि आएपछि केही प्रयास त भयो तर अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने निचोड जनप्रतिनिधिले निकाले । सबैले बेवास्ता गरेका कारण यो भवन यति जीर्ण बनेको छ कि गोदामघरको रुपमा समेत प्रयोग हुन नसक्ने प्राविधिकहरुले पुष्टी गरेका छन् ।
उपभोक्तालाई स्वस्थकर मासु खुवाउने उद्देश्यले निर्माण भएको पशु वधशाला निर्माणमा ६ करोड ५० लाख रुपैया खर्च भइसकेको छ । ६ करोड बढी रुपैयाँ स्वाहा पारेपछि अहिले फेरि अर्को वधशाला निर्माण तयारी पनि गरिएको छ ।
२०७१/०७२ मा तत्कालीन पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपन्छी बजार निर्देशनालय र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको निगरानीमा वधशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइएको थियो । सुरुमा सरकारले ५० लाख रुपैयाँ दिएको थियो भने सोही आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ वधशाला निर्माणका लागि थपिदिएको थियो । निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म यसको लागत ६ करोड नाघेको थियो । पशु वधशाला निर्माणका लागि भवनको स्ट्रेन्थ रेट करिब २० प्रतिशत हुनुपर्नेमा भवनको गुणस्तर जम्मा १२ प्रतिशत रहेको निष्कर्ष प्राविधिकहरुले निकाले । त्यसपछि वधशालालाई यही अवस्थामा मर्मत सम्भार गरेर गोदामघर बनाउने र फोर पी मोडलमा अर्को संरचना तयार गर्ने गरी अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
पछिल्लो समयमा यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको भारतको जिके सेन एण्ड एसोसिएट्स कम्पनीका इन्जिनियर जितेस पालका अनुसार पहिला निर्माण गरिएका संरचनाको भौतिक प्रगति शून्यजस्तै छ । जुन प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको उनले बताए ।
हालसम्म पशु वधशाला निर्माणका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको ६० लाख र पशुपन्छी बजार निर्देशनालयको ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ गरी ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यति मात्र हैन, पशु वधशालाका लागि आवश्यक पर्ने झण्डै ६० लाख मूल्य बराबरका उपकरणसमेत खरिद भइसकेका छन् । जुन अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
फोर पी मोडलमा वधशाला चलाउने तयारी
बुटवलमा पशु वधशालाको चर्चा भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । वधशालाका लागि भन्दै एउटा भवन नै बनाएको ४ वर्ष भयो । स्थानीय सरकार गठन भएपछि कामले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि केही समय पशु वधशाला कसरी चलाउने भन्नेमै बित्यो । उपमहानगरपालिका आफैंले चलाउने वा व्यवसायीले चलाउने वा दुवैले संयुक्त लगानी गरेर चलाउने भन्दाभन्दै धेरै समय बित्यो । अहिले फेरि यो वधशाला फोर पी मोडलमा चलाउने तयारी गरिएको छ ।
करिब २२ करोडको लागतमा पुनः अत्याधुनिक पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । पछिल्लो समयमा हेफर इन्टरनेसनल नेपालले यस विषयमा सहजीकरण गरिरहेको छ । हेफर नेपालका कार्यक्रम निर्देशक डा. तीर्थ रेग्मीका अनुसार पशु पालक किसान, सरकार, व्यवसायी र साझेदार निकाय बीचमा सहकार्य गरी एउटा पब्लिक कम्पनी निर्माण गरेर वधशाला सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।
कसले कति गर्ने लगानी ?
वधशाला निर्माणका लागि करिब २२ करोड रुपैयाँको स्टेटमेन्ट निकालिएको छ । प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वधशाला निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने बुटवल उपमहानगरपालिकाले ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसबाहेक सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरुबाट ६ करोड २५ लाख, मासु व्यवसायी संघमा आबद्ध व्यवसायीहरुबाट ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ कवुलसमेत भएको हेफर इन्टरनेसनलका बजार विकास निर्देशक अनन्त शिलवालले जानकारी दिए ।
नयाँ संरचनाअनुसार, साइट निर्माणका लागि १ करोड २२ लाख, भवन निर्माण तथा सिभिल वर्कको लागि ६ करोड ७० लाख, मुख्य प्लान्ट तथा उपकरणका लागि ६ करोड ६२ लाख, अन्य उपकरण तथा औजारका लागि ३ करोड ५७ लाख र सञ्चालन पूर्व खर्च तथा कन्टीजेन्सी खर्चको कुल २ करोड ९० लाख रुपैयाँ लागत स्टिमेट गरिएको छ ।
वधशाला जसरी पनि तयार गर्छौं
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले वधशाला निर्माण जसरी पर्ने गर्ने बताएका छन् । फोर पी मोडलबाटै वधशाला निर्माण हुने उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २७, २०७६, १६:४१:००